आश्विन ११ गतेदेखि ३० करोडको आईपिओ बजारमा ल्याउने तयारीमा छौंः आईपिओमा २ गुण बढि आवेदन पर्ने विश्वास लिएको छु - Aathikbazarnews.com आश्विन ११ गतेदेखि ३० करोडको आईपिओ बजारमा ल्याउने तयारीमा छौंः आईपिओमा २ गुण बढि आवेदन पर्ने विश्वास लिएको छु -
एसके तमोट बीमा क्षेत्रमा नामै काफी छ भन्दा फरक पर्दैन ४ दर्शक भन्दा बढि बीमा क्षेत्रमा विताएका तमोटलाई विमा विज्ञको उपाधी दिँदा फरक पर्दैन । २०२४ साल नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट विमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका एसके तमोटले नेशनल इन्स्योरेन्समा २० वर्ष, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्समा ३ वर्ष, यूनाइटेड इन्स्योरेन्समा १० वर्ष, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा ८ वर्ष, रिलायन्स इन्स्योरेन्समा २ वर्ष उच्च व्यवस्थापन टिममा बसेर काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् । उनी हाल नेपालका सीभिल बैंक, बेष्ट फाइनान्स कम्पनी, सेञ्चुरी बैंक, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक, गोर्खाज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंक लगायत दर्जनौ प्रतिष्ठित संस्था र व्यक्तिहरुको लगानी रहेको पछिल्लो निजीवन बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडका महाप्रबन्धक छन् ।
करिब १ सय ८२ जना संस्थापक शेयरधनीहरु रहेको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आश्विन ११ गते देदि ३० करोड बराबरको २७ लाख ३० हजार कित्ता साधारण शेयर निश्कासन गर्न लागेको छ । पछिल्लो समय बजारमा आएको नयाँ निजीवन बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको हालको चुक्ता पुँजी ७० करोड रहेको छ । भने आईपीओ ३० करोडको जारी पछि १ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । देशभरी करिब ४० शाखा सञ्जालबाट सेवा दिएको यो कम्पनी २०७५ असार ६ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको थियो ।
यस कम्पनीमा बैंक वित्तिय संस्था र व्यवसायी घर घरानाबाट प्रतिनिधित्व भएको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष कुनाल कयाल छन् भने सञ्चालकहरुमा रामचन्द्र खनाल शशिराज बज्राचार्य, कृष्ण बोहोरा र दिपेन्द्र अग्रवाल रहेका छन् ।
पछिल्लो समय निजीवन बीमा कम्पनीमा राम्रो व्यापार गर्दै आएको यस कम्पनीले कोरोना महामारी बीच आएको कोरोना बीमा २ करोड १५ लाखको गरेको देखिन्छ । आश्विन ११ गते ३० करोडको साधारण शेयर बजारमा पठाउदै गरेको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडका महाप्रबन्धक एसके तमोटसंग सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको लामो कुराकानीको केही अंशः
० पछिल्लो समय बजारका आएको निजीवन बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको वित्तिय अवस्था चाहि कस्तो छ ?
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पछिल्लो वित्तिय अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ । ७० करोडको पुँजी अहिले छ । अब आश्विन ११ गते ३० करोडको आईपीओ बजारमा लैजादै छौं यसपछि १ अर्ब पूँजी पुग्ने छ । गत साल ५३ करोड व्यापार भएको छ । खर्च सबै कटाएर ५ करोड हामीले यो छोटो समयमै नाफा आर्जन गरेको अवस्था चाहि छ । हाम्रो विभिन्न बैंक र वित्तिय संस्थामा करिब करिब ९५ करोड निक्षेप छ । सबै लगानी राम्रा छन् । कर्पोरेट सुशासन हाम्रोमा अत्यन्तै राम्रो छ । हामी ढाटेर व्यापार कहिले पनि गर्दैनौ । यो हाम्रो विशेषता नै हो ।
० आगामी आश्विन ११ गते ३० करोडको साधारण शेयर बजारमा ल्याउदै हुनुहुन्छ यो सर्वसाधारण जनताले किन्नुपर्ने कारण चाहि के हो ?
बीमाको बजार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बीमा दुखको साथी हो । यसमा लगानी गर्दा निकट भविष्यमा अन्यन्तै राम्रो प्रतिफल पाइन्छ । त्यसकारण म आम जनतालाई हाम्रो आईपीओ लिन आग्रह गर्दछ । जनताहरुसंग पैसा छ । हामीले लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं । यो जनरल इस्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड दर्जनौ बैंक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लब प्रतिष्ठित घर घरानाको प्रमोटर शेयरबाट स्थापना भएको र २ वर्षमा धेरै चाडो प्रगति गरेको नाम चलेको कम्पनी भित्र पर्दछ । मलाई लाग्दछ आगामी दिनमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिन्छ । त्यसकारण साधारण शेयर सर्वसाधारणले खरिद गर्ने कुरामा म विश्वस्त र ढुक्क छु ।
० तपाईको कम्पनीमा के कस्ता प्रोमोटरहरु छन् र शाखा सञ्जाल कति छ ?
यस कम्पनीमा ग्लोबल आईएमई बैंक, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक र केही फाइनान्स कम्पनी र लव प्रतिष्ठित घर घरानाका व्यक्तिहरुको लगानी रहेको छ । देश भरि २ वर्षको अन्तरालमा हामीले करिब ४० शाखा सञ्जालबाट सेवा प्रदान गरेका छौं । त्यसबाट हाम्रो प्रगति राम्रो छ । हाम्रो आईपीओमा २ गुणा बढि आवेदन आउने संकेत मैले पाएको छु । अर्को कुरा हामीमा कर्पोरेट सुशासन अत्यन्तै राम्रो छ । हामी कसैलाई पनि ढाटेर लुकाएर काम गर्दैनौ । बीमितका दाबी भुक्तानी हामी ७ दिन भित्रै भुक्तानी गर्दछौं । हामी नियतबस कसैलाई दुख दिने काम गर्दैनौं । यो मेरो प्रतिबद्धता पनि हो । आज यो जीवनको उत्तरार्धमा आएर मैले नयाँ कम्पनी चलाएको छु । यसको उचाई थप बढाउने योजना मेरो छ ।
० करिब ४ दर्शक बीमा कम्पनीहरुको उच्च पदमा रहि कार्य सम्पादन गरि सक्नु भएको तपाई यो जीवनका उत्तरार्धमा पनि सकिृय रहनु भएको छ काम गर्ने जोस अझै छ तपाईमा ?
मैले सानै उमेरमा बीमा कम्पनीमा काम गरे दिन प्रतिदिन सफलता हासिल गर्दै आए र यसबाट प्रेरणा मिल्दै गयो र आजका दिनसम्म पनि बीमा बजारमा रमाई राखेको छु । सबै साथीभाईले हौसला दिनु भएको छ । अझै केही वर्ष बीमा क्षेत्रमै विताउने योजना पनि छ नि ।
० पूरानो बीमा कम्पनीमा काम गरेको मान्छे नयाँ कम्पनीमा प्रमुख भएर काम गर्दा चुनौती र अवसर दुबै हुन्छ होइन र ?
चुनौती नयाँ छ । तर, अवसर पनि छन् । यसलाई आफ्नै ढङ्गले अरु बीमा कम्पनीसंग प्रतिस्पर्धा गराउने र नेपालको निजीवन बीमा कम्पनीमा टप १० भित्र यस कम्पनीलाई पार्ने योजना मेरो छ ।
० बीमा बजारमा तपाईको नाम कहिले काँही चर्चाको विषय पनि बन्ने गरेको छ । कारण चाहिँ के होला ?
सबै बीमा कम्पनीहरुले आ–आफ्नो तरिकाबाट काम गरेका छन् । साथीभाईहरुले बेलाबखत नाम लिनु स्वभाविक नै हो । जसले जे जानेको छ । त्यही गर्ने हो मेरो ४ दर्शक विमा बजारमै जीवन वित्या । म कस्तो मान्छे सबैलाई थाहा नै छ । कसले के भन्दछ के गर्दछ । म त्यसका खासै चासो राख्दिन । आफ्नो कम्पनी र कामलाई ध्यान दिएर अगाडी बढ्ने गर्दछु ।
० बीमा के हो र यो किन जरुरी छ ?
बीमा अनिवार्य छ । यसले रिक्स शेयर गर्दछ । हामी केही पैसा तिरेर अरु कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने हो । त्यसकारण भूकम्प, बाढी पहिरो र उच्च जोखिमबाट भएको क्षतीको मुल्याकन गरेर बिमितलाई रकम दिन्छ बीमा कम्पनीले । त्यसकारण बीमितको बोझ कम हुने, ऋणको भारबाट मुक्त हुने गर्दछ । त्यसकारणले बीमा अनिवार्य छ । र बीमा दुखको साथी पनि हो भूपेन्द्रजी ।
० तपाईले बीमा अनिवार्य छ भनिरहँदा बीमा गर्ने बीमितहरुले दाबी भुत्तानी नपाएका, दुख पाएका र बीमा समितिमा पुगेर उजुरी दिएका प्रसस्त उदाहरण छन् नि यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
बीमा गर्ने वित्तिकै मान्छे खुशी हुन्छ । तर, जब क्षती भएपछि त्यसको मुल्याकनबाट दिइने रकमबाट उ खुदी हुँदैन र उसले बीमा कम्पनी बदमास हो भन्ने गरेको उदाहरण छन् । तर, यो गलत हो ।
अर्को कुरा सबै कागज पत्र बुझाउनु पर्दछ । विमितले भुक्तानी लिँदा क्षतीको अनुमान हुनुप¥यो । धेरै कुरा छ । तुरुन्तै बीमा गर्ने अनि क्षती भएपछि तत्कालै चाहिन्छ भन्नु गलत हो । बीमा कम्पनीहरुले २ हजारमा १० लाखको बीमा गरेको हुन्छ । १० लिन त प्रमाण सबै चाहिन्छ नि । बीमा कम्पनीहरुमा पनि जनताको पैसा लगानी छ । त्यसकारण जनताको पैसमा जे पायो त्यही गर्न पाइदैन । जनताको पैसा हेर्न र बढाउन नै हामीलाई नियुक्ती दिएको हो । त्यसकारण प्रमाण सहित आए बीमाले तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छ । यसमा दुई मत छैन ।
० निजीवन नयाँ बीमा कम्पनी हो जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यो कम्पनीमा अरु कम्पनी यसमा अरु भन्दा फरक के छ त ?
नेपालमा पूराना १७ वटा निजीवन बीमा कम्पनी छन् । ३ वटा नयाँ हामी बजारमा अमाएका छौं । नयाँलाई ब्यापार बढाउन गाह्रो छ । त्यसकारण हामीमा छिटो दाबी भुक्तानी दिने गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्ने दायित्व बढेको छ । हामीलाई पूराना कर्मचारी साथीहरुलाई नयाँ कम्पनी भए पनि एउटा विश्वासको आधारमा व्यापार दिने हो । त्यसकारण त्यो विश्वासलाई हामीले सधै कायम राख्नु जरुरी छ । अर्को कुरा दाबी भुक्तानी छिटो र छरितो ढंगबाट हामी सबै बीमा कम्पनीले गर्नु पर्दछ र ग¥यौ भने बीमा बजार अझै बढेर जान्छ ।
० पूँजी अब आईपीओ बजारमा गएपछि निकट भविष्यमै १ अर्ब पुग्ने छ । त्यसपछि चुनौती बढ्ने र व्यापार बढाउने अवसर पनि आउला नि ?
सहि हो । पैसा बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राख्न काम पहिला हुन्छ । त्यसपछि त्यसबाट ब्याज आउने त भयो नि त्यसपछि बैंकहरुले पनि विजनेश दिनु हुन्छ । अर्को कुरा शाखा सञ्जाल बढाउने दक्ष कर्मचारी ल्याउने तालिम दिने र व्यवसाय बढाउने अवसरहरुको खोजी गर्ने दायित्व कम्पनीमा बढेर जाने निश्चित छ नि ।
० कोरोना बीमालाई चाहि कसरी लिनु भएको छ त ?
यो राम्रो पक्ष मान्नै पर्दछ । सरकारको सहयोगमा हामीले कोरोना बीमा गरेका छौं । पछि रिवाईज भएर आयो । यो अर्को राम्रो पक्ष हो । केही राहत कोरोना विरामीलाई दिन यो बीमा ल्याएको देखिन्छ । पछिल्लो समय परिमार्जित भएर आएको कोरोना बीमामा उपचार खर्च, डाक्टरको खर्च दिने कुरा पनि राम्रो छ । विलको आधारमै दिइने हो ।
० पछि परिमार्जित भएर आएको कोरोना बीमाले बीमा प्रति मान्छे प्रति नकारात्मक सोच आएको जस्तो देखिन्छ नि ?
यसलाई राम्रो सोच्नु प¥यो । बीमा कम्प्नीहरुमा पनि जनताकै शेयर छ । पैसा छ । त्यसकारण नकारात्मक सोच राख्नु उचित हुँदैन । घाटा हुनेगरी काम गर्दा लगानीकर्ताले के पाउने हो । त्यसकारण सोच विचार गर्नु जरुरी भयो र बीमा समितिले ग¥यो नि ।
० पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरु नै टाट पल्टिने देखिएर कोरोना बीमा परिमार्जित गरेको त होइन ?
यस्तो होइन । कोरोना महामारी आयो राज्यले केही राहत दिन कोरोना बीमा ल्याएको पक्कै हो । संसारमा काही पनि यस्तो बीमा हुँदैन र छैन पनि । कम्पनी डुवाएर जनताको पैसा डुवाएर कसरी बीमा गर्न सकिन्छ । राज्यले ल्याएको पोलिसीमा हामीले साथ दिएको हो । त्यसकारणले अहिले आएको कुरा चहि ठीक छ ।
० अहिलेसम्म कति जति कोरोना बीमा गर्नु भएको छ त ?
आजका मितिसम्म हामीले २ करोड १५ लाखको कोरोना बीमा गरेको छौं । यो राम्रो प्रगति हो ।
० दाबी भुक्तानी चाहि कोरोना बीमाको कति गर्नु भयो ?
१५/२० वटा दाबी भुक्तानीका निवेदन हाम्रोमा आएका छन् । हामी ७ दिन भित्रै भुक्तानी गर्ने पक्षमा छौं । कागजपत्र मिलेको भए १÷२ दिनमै भुक्तानी गर्ने मैले निर्देशन नै दिएको छु ।
० अन्त्यमा केही छ ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारण शेयर आश्विन ११ गतेबाट बजारमा आउँदै छ । लगानीलाई बढाएर प्रतिफल दिने छौं । ढुक्क भएर हाम्रो आईपीओ लिन म आग्रह गर्दछु । आर्थिक बजार मासिकको आश्विन अंकबाट
रिलायन्स लाइफको आइपीओ २० हजार ५०९ जनाले नपाउने
सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धकलाई कामु महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी
सेयरबजार शिथिल भयो वा बैंकमा तरलता बढ्यो भन्ला तर ति मौसमी कुरा हुन्
कसैलाई पनि सहुलियत नदिनू